Izikhwama Zokulala Abakhiqizi - China Izikhwama Zokulala Abahlinzeki Nefektri
Isikhwama sokulala somama esinemibala yangaphandle esingasetshenziswa ezinkambeni zobungcweti ze-OEM
Singabantu inkampani abanesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 'zokukhiqiza kanye yokukhiqiza imikhiqizo phansi. Ukuze kuhlangatshezwane nezigcawu ezahlukahlukene zokusebenzisa emkhakheni wobungcweti, senze intuthuko eminingi kubuciko bendabuko. Lo mkhiqizo unezinhlobonhlobo zezincazelo nemiklamo yokusebenza eyingqayizivele ongakhetha kuyo ukuhlangabezana nezidingo zakho ezigcawini ezahlukahlukene, indwangu yangaphandle yalesi sikhwama sokulala yenziwa ngemithi yokwelashwa ye-20D380T inayiloni ye-DWR, engavimbela ukumelana kwamanzi kahle, ithuthukise ukumelana nokungcola, futhi yenze lula ukuhlanzwa nokunakekelwa nsuku zonke. Ulwelwesi lwangaphakathi lusebenzisa indwangu engu-20D 380T yenayiloni evikela velvet, inokuphefumula okuhle nokuthungwa okunobungane besikhumba, okwenza abasebenzisi bakhululeke.
Sifihle igobolondo elingangeni manzi isikhwama sokulala samasosha sokulala sezulu esibanda kakhulu
Wake wavuswa phakathi nobusuku obubandayo? Uma ulele esikhwameni sokulala etendeni lakho, uqhaqhazela futhi uqhaqhazela, ungakwazi ukulala kalula ngenxa yamakhaza, ulalele umoya obandayo, imvula neqhwa ngaphandle, ingabe ulangazelela ukuba nesikhwama sokulala esinjalo esivumela ukuthi ujabulele ukulala kwakho okufudumele lapho kubanda kakhulu? Manje, yisikhathi sokuvumela ukuthi ukhethe, ufanele le mishini.
Umkhiqizi we-2020 ophakeme u-90% izikhwama zokulala ezigcwalisiwe ngenani lokuncintisana
Uma usakhathazekile ngokuthi yini ongayikhetha isikhwama sokulala ngaphandle, lokhu kuzoba ukukhetha kwakho okuhle kakhulu. Sihlelele ngokukhethekile izinsimbi zokugcwalisa ezahlukahlukene ukuhlangabezana nezidingo ezithile zabantu abahlukene ezikalini zokushisa. Noma ngabe ukulungele ukuyokhempa, ukukhweza izintaba, ukukhuphuka, ukuhamba ngebhayisikili, ukudoba, noma ukuhamba, noma yini.
2021 umbala okhanyayo odumile phansi wagcwalisa isikhwama sokulala somama
Isikhwama sokulala somama esijwayelekile siyimodeli ethandwa kakhulu phakathi kochwepheshe. Ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, sithuthukise ubuciko bendabuko ukwenza ngcono ukufudumala nokunethezeka. Ngasikhathi sinye, bhekisa kumbala wamanje othandwayo ukukwenza uthande ukukhempa nokuhamba izintaba. Kunezinketho eziningi zemfashini. Indwangu engaphandle yalesi sikhwama sokulala yindwangu ye-20D 320T yeNayiloni, enezindlela zokulwa nemishini yokuxosha amanzi, okuyenza ihlale iqine futhi ingameli ukungcola futhi kube lula ukuyihlanza. Indwangu yolwelwesi yenziwe ngendwangu engu-320T ephefumula ephefumula ne-velvet yokuqinisa induduzo yomsebenzisi. Ingaphakathi ligcwele idada elingu-800g 80% phansi, kanti isisindo sisonke cishe singama-1050g.